ကိုရီးယားဆိုတာကလည်း ရုပ်ရှင်ထဲကလို နူးနူးညံ့ညံ့လေးလဲဟုတ်ဖူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကိုရီးယားဆိုတာကလည်း ရုပ်ရှင်ထဲကလို နူးနူးညံ့ညံ့လေးလဲဟုတ်ဖူး
သတင်းအမှန်က သူ့ကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေ မနက်ပိုင်းအီအီးပါရင်း စွန့်လွှတ်တော့မယ်ပြောလို့တဲ့ အီအီးမပါနိုင်အောင် ဗိုက်ခွဲပြီး အူထုတ်ထားတာ ဗြဲ
စိတ်ရောဂါ ရှိတဲ့ လူနဲ့ တူတယ်။
မိန်းမတွေ အူတိုမတို လေ့လာတာထင်ပ…..ဒီလူကြည်.ရတာ လက်တွေ.သမားနဲ.တူတယ်…..။
ဘယ်လိုများဖြစ်ရပြန်တာလဲနော် …. ။ မြန်မာနိုင်ငံက ရဲတွေကို အလုပ်လာပေးနေတယ် …. ။
သူများ နိုင်ငံလာပြီး တစ်ကုတင်တည်း အတူအိပ် ၊ အိပ်မောကျမှ လူသတ် ၊ အူစွဲထုတ်တယ်ဆိုတော့ …. ဘုရား ဘုရား … ဆားပုလင်း နှင်းမောင် တကယ်ရှိတယ်လို့များ ………. ထင်နေလေရော့လား …
ဘာတွေများဒီလောက် နာကြည်းချက်ပြင်းနေပါလိမ့် …
သတင်းထူးဘဲဗျာ။ ဟိုတယ်တော့နေရင်းထိုင်ရင်း အကုသိုလ်ဝင်တာဘဲ၊
ဓာတ်ဆီလောင်းပြီး မီးရှို့တာထက် ဆိုးသွားပြီ။ ဘယ်ကတည်းက အငြှိုးနဲ့များ လုပ်ရက်လေသလဲ…
အကြောင်းမဲ့တော့ မသတ်လောက်ပါဘူး။ တစ်ခုခုတော့ ရှိမှာပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် ဒီလူက စိတ်ကော မှန်ရဲ့လား။ တချို့ကျတော့ အိပ်မက်မက်ရင်း ယောင်တာရှိသေးတယ်လေ… စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ စစ်ရမယ်ထင်တယ်နော်။ တော်တော်မလွယ်တဲ့အမှုပဲ။
aww i’m afraid. အတော်ရက်စက်ကျတာပဲ့နော့….
ဟိုတယ် အတွက်တော့ သွားပါပီ….မြန်မာပြည်ကို လာပီး..အလုပ်ရူပ်အောင် လာလုပ်နေပြန်ပီ……
ဘုရားဘုရား။ ကြောင်သွားတာထင်တယ်နော်။ ကြောက်စရာကြီး။ အူပါဆွဲထုပ်တာဆိုတော့ပုံမှန်တော့မဟုတ်လောက်ဘူး။ အပများမှီတာလားမသိ။ အောင်မယ်လေး။
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျာ..ကိုရီးယားတွေကို ဒရမ်မာတွေထဲကလို တော့ မထင်ကြပါနဲ့ ..လွန်ခဲ့ တဲ့ တစ်လလောက်က ဆိုးလ်မှာ.. ကောင်မလေးတစ်ယောက် ကို လူကြီးတစ်ယောက်က မုဒိန်းကျင့်ပြီးသတ်ဖို့ လုပ်ပါတယ်..ကောင်မလေးက ဖုန်းဆက်ပြီးရဲ ကို ခေါ်တယ်…နေရာ ကိုမသိလို့ ရှာဖို့ ပြောတယ်.. အဲဒါကို ရဲ ကသောက်ဂရု မစိုက်ဘူးဗျား(နေရာမသိလို ဒဲ့ ).. ပြီးတော့ ကောင်မလေးကို အဲ မုဒိန်းကောင်က မုဒိန်းကျင့်တယ်..ကောင်မလေးက ဖုန်းကို တမင်ဖွင့်ထားတယ်(မုဒိန်းကောင်မသိအောင်) .ရဲ က လည်း အသံတွေကြားနေရတာ..အဲ ဒါကို ရဲ က ဘဲနားမှာလည်းဆိုတာလိုက်မရှာဘူးဗျား.. အဲကောင်မလေး မုဒိန်းကျင့်ခံရပြီးတကယ်သေသွားပါတယ်.. ခု ရဲ ချုပ်လည်း ပြုတ်ပါပြီ..မယုံရင် ခင်ဗျားတို့ ကို ၇ီးယားက ဘော်ဒါတွေရှီရင် မေးကြည့်တော်မူကြ..ကိုရီးယားဆိုတာ သိပ်လည်း မနူးညံ့ကြပါဘူးဗျာ.. မြန်မာတွေထက်ဆိုးပါတယ်.(ခုတော့မဟုတ်လောက်တော့ဘူးထင်တယ်..မြန်မာ က လည်း လူကိုအပိုင်းပိုင်းခုတ်သတ်တာတို့ ဘာတို့ ကြားနေရပြီကိုး)
ဘုရား ဘုရား အိုးပါးရယ် ရက်စက်ပါပေ့ဗျာ..
လူရှိန်အောင်သဂျီးလေသံနဲ့ ဝင်ဟောက်အုန်းမှ ကွိကွိ
ကိုရီးယား ( တောင် ) တွေ သူတို့တိုင်းပြည် ဘလိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့ဂျဒါ ပြောဘာဘား
ခင်ဗျားတို့ ဒီလိုသာ လိုက်စောက်ပြောဒမ်းဆို ရွှေတိဂုံ ဘုရားမုသ်ဝမှာ ဖိနပ်ခိုး အကြံဖန်လုပ်တဲ့
အင်း ဒီမှာ လာပြီး ရှုပ်ပြန်ပြီ နော် ကိုယ့်အိမ်ရောက်မှ ကိုယ့်ကို ရှင်းတာမဟုတ်ဘူး ၊ဘယ်လိုဟာတွေပါလိမ့်၊
အိုကြားရတာ နားဝမျာ မသက်သာ…
ကြားရသမျှ တွေထဲ စိတ်မကောင်းစရာတိုးပြန်ပေါ့။